IMEX America: Ukuba sifuna into entsha eqhelekileyo, kuya kufuneka siyile ngokwethu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » IMEX America: Ukuba sifuna into entsha eqhelekileyo, kuya kufuneka siyile ngokwethu
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Izithethi ezivela kubuchwephesha bendawo, ubugcisa, uyilo, kunye netekhnoloji yomsitho iphonononga izinto ezintsha kakhulu ngoJulayi we-IMEX Buzz Day.
Ukusebenzisana kunye nokwenza izinto ezintsha ngamagama aphambili oSuku lwe-Buzz lwe-IMEX kulo Julayi.
Le iya kuba yimva kwemini yemfundo yasimahla kwiqonga elitsha lenkampani, IMEX BuzzHub.
Ngaphantsi kwebhanile i-Extreme Innovation -Yintoni kwaye kutheni ibalulekile? Iingcali ezivela kwi-Airbus, iSmyle, i-GCB kunye neearhente zoyilo ziya kuchaza indlela ezityhalele ngayo imida yokuhambisa utshintsho kunye nokwenza ixabiso elitsha kumzi mveliso wazo.
Kwakhona-kwishishini kuqala -Iqela le-IMEX lisebenzisana neSwapcard ukuhambisa iiseshoni zecrossover. Ababekho kuzo zombini i-Swapcard's Evolve Homecoming Umsitho: Ukubuya kweShishini eliKhulu kunye ne-IMEX's Buzz Day baya kuba nakho ukufikelela kumxholo obekwe ngokudibeneyo kubandakanya inqaku eliphambili lika-Arianna Huffington.
Zombini izizwe zeminyhadala ziyamenywa ukuba zize kunye kumsitho wokuvala kwiGather Buzz Fest ebanjelwe kwiqonga elibonakalayo Gather. Le ntloko ekhokelwa yi-avatar kwimidlalo yevidiyo engama-80 yayiyeyona nto ibalulekileyo ngexesha lokuzama kwe-IMEX kwinyanga ephelileyo.
Ukuqala ngokutsha-ukuqala nge-Airbus
Inkokeli yeelebhu ezintsha ze-Airbus isungula uSuku lweBuzz nge-7 kaJulayi. UChristophe Debard uyinkokheli yeProtoSpace Toulouse, ilebhu enikezelwe kwinto entsha kwiAirbus. Ukwaseke neLebhu yoLuntu yeAirbus - inyathelo elenza ukuba abasebenzi beAirbus bathathe inxaxheba kwiiprojekthi ezichaphazela ngokuthe ngqo iindawo kubandakanya ukukhubazeka, impilo, imfundo kunye nokusingqongileyo. Inkqubo yenziwa ngenxa yamava kaChristophe okhubazekileyo.
UChristophe Debard, iNtloko yeProtoSpace Toulouse -Airbus
Ukuba nobuchule kunye nokusebenzisana ukuqhuba izinto ezintsha ngumxholo oqhuba kuzo zonke iiseshoni zokuphumla zosuku. URobert Dunsmore, okhokela enye yezi ndibano, uyacacisa: “Yiba nesibindi. Ukuba sifuna into eqhelekileyo, kuyakufuneka sizenzele yona! ” Umcebisi ngobuchule uRobert usebenzisana noFrankie Boyle, umculi wase-UK osekwe ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava kwezobugcisa, ezolonwabo nakwimicimbi yeziganeko. UFrankie ugxile ekusebenziseni ukukhanya kwamabali kunye nokwenza amava obuchule: 'Ukukhanya lulwimi', utshilo. UFrankie uza kwabelana ngophando lwakhe ngokubaluleka kokukhanya kwimpilo-ntle, kwindima yayo kwiinkqubo zethu zokuqonda, impilo yengqondo kunye nokuqonda kubomi bemihla ngemihla.
UFrankie Boyle, uMseki-uMlawuli we-Febo Designs Ltd.
I-GCB iya kubonelela ngombono wabo njengabayili 'beGumbi leMpendulo' elitsha. Eli qonga lokuyila livulekileyo likhuthaza abacwangcisi beentlanganiso zehlabathi, abaququzeleli, abathengisi, kunye nabathathi-nxaxheba kwiminyhadala yokuqokelela kunye ngokudibeneyo ukuphuhlisa iimodeli zeshishini, iimveliso okanye iinkonzo.
'Uza kuthatha ntoni kule ngxaki?' Kubuza uMatt Margetson, uMseki kunye noMlawuli wezoBuchule eSmyle, kwiseshoni yakhe. Uya kujonga indlela iimveliso ezifune ngayo ingcebiso kwishishini lokuyila ukuze zihlale zichanekile kwaye zinxibelelane nabaphulaphuli babo ngeendlela ezibandakanya ngakumbi. Emva kokuyilungisa ngokukhawuleza inkampani ukuba ibe nguvulindlela wamava, uMatt ukhokela iqela lakhe ekufuneni ezona ndlela zokucinga zibalaseleyo kunye neetekhnoloji yakutshanje.
Umzi mveliso wokuqala -I-IMEX kunye ne-Evolve izizwe ziyahlangana
Kowokuqala kolu shishino, iqela le-IMEX lisebenzisana neSwapcard ukusasaza umxholo ngaxeshanye. Abazimasa uSuku lwe-Buzz kunye ne-Evolve's Homecoming banokufikelela kwiseshoni ekhethekileyo yendlela yokwakha inkcubeko yokuyila.
Umcebisi weqhinga, uCris Beswick, oza kuqhuba le seshoni, uyacacisa: "Isidingo sokhokelo-sikhokelo, ubunkokheli bokuyila nokwakha inkcubeko yokuyila izinto ezintsha ayikaze ibe phezulu kwi-ajenda yeqhinga." Ukwamkelwa kwihlabathi liphela njengenkokeli yokucinga kwisicwangciso esiliqili, ubunkokheli kunye nenkcubeko, uCris uncede ezinye ze-CEO ezinamabhongo kwihlabathi, iinkokheli, iinkampani kunye noorhulumente ukusombulula ezona ngxaki zinzima zokuyila. Uya kuthatha la mava kwaye abelane ngezinye zeengcebiso ezivela kwincwadi yakhe ethengwa kakhulu ethi "Ukwakha iNkcubeko yoTshintsho."
Umzi womsebenzi ke uyaqhubeka nethuba loSuku lweBuzz kunye noluntu lwaseSwapcard's Evolve ukuba lihlale kunye kwiNdibano. Ichazwe ngomnye umthathi-nxaxheba njengo "uziva ngathi utsibe kwikhompyuter yakho negumbi eligcwele abantu abenze okufanayo." Idolophu idibanisa ii-avatars ezilula kunye ne-80s yemidlalo yokudlala ukwenza umhlaba wedijithali omnandi, ngokukhawuleza kwaye lula.
UCarina Bauer, iCEO yeQela le-IMEX, uyacacisa: “Ubuchule bokuphela kwendlela yokwenza utshintsho olunentsingiselo kunye nokwakha ukuya phambili ngcono. Kwi-IMEX sihlala sizama ukunyanzela imida yoyilo kunye nokulinga egameni lomzi mveliso. Ukuvumela i "BuzzHubbers" zethu ukuba zikhe zibekho kwingingqi ye-Evolve kunye nethuba lokuxhoma- phantse -kwi-Gather Buzz Fest on Gather. Kuyasivuyisa ukukhokela kulo moya wentsebenziswano, hayi ukhuphiswano. ”
UJulien Bouvier, uMlawuli weZinto eziguqukayo kunye neQhinga lezeMicimbi eSwapcard, wongeza athi: “Zombini i-IMEX kunye neSwapcard behambisa umxholo wenyanga kubaphulaphuli babo bedijithali kwaye umbono wokuba babelane ngomxholo weza kuwo omabini amaqela ngokukhawuleza. Uluntu lwe-Evolve kunye ne-BuzzHub zombini ziyimizekelo ephambili yabaququzeleli bemisitho abahamba kwimodeli yokuzibandakanya yeentsuku ezingama-365. Ayonyusi ukufikelela kuphela kubaphulaphuli bonke, kodwa uluntu lubonelela ngendawo yokwabelana ngolwazi ekhuselekileyo kunye nokwenza izinto elubala phakathi kwegama kunye nomthengi. ”
IMEX Usuku lweBuzz yenzeka nge-7 Julayi kwaye ubhaliso lwenzeka khulula. Usuku olupheleleyo lokufunda lubekwe kwindawo ene- Guqula ukuza kwamakhaya: Ukubuya kweShishini eliKhulu.
I-IMEX BuzzHub iqhuba de kube ngu-Septemba ehambisa unxibelelwano lomntu, ixabiso leshishini kunye nomxholo ofanelekileyo 'kwiNdlela eya eMandalay Bay' ukuya kuthi ga IMEX yaseMelika, NgoNovemba 9-11, kunye noMvulo weSmart, onikwe amandla yi-MPI ngo-Novemba 8.